Eyona ntonga yeTaper yoMvelisi kunye neFektri | Gimarpol
I-Gimarpol's Tapered Drill Rod enecandelo le-hexagonal chuck ukubonelela ngendawo yokujikeleza i-chuck bushing. Ihlala ine-collar eyenziweyo ukugcina indawo efanelekileyo yobuso e-shank kwi-drill rock, kunye ne-tapered bit drill ekugqibeleni. Ubude bentsimbi ye-Tapered bulinganiswa ukusuka kwikhola ukuya esiphelweni. Imingxunya ihlala igrunjwe kwii-0.6 m ezongeziweyo ukulungiselela ubude bokutya komlenze womoya. Isinyithi esombiweyo siyatsalwa kwaye silandelwe ngesincinci esincinci sedwala sokugrumba kubude bentsimbi elandelayo kulandelelwano.
Zimbini iidayimitha zentsimbi emiselweyo ye-hex - 22mm okanye 25mm. Kwaye intwana yethu eqhotyoshelweyo kunye neentonga ziza kwiindidi ezahlukeneyo zeetapile (isidanga esi-7, isidanga esili-11, isidanga esili-12)
Iirandi ze-Tapered ze-Gimarpol ziyafumaneka ngesantya esiphezulu okanye unyango olushushu lobushushu.
I-Angle yeTaper: 7 °, 11 °, 12 °
Socket Ububanzi: H19 ， H22 ， H25 MM
Igama Product: ukuzama Intonga
Umbala: Mnyama, Luhlaza, Bomvu, okanye isicelo sakho
Ubukhulu: Njengoko isicelo sakho
Ubuhle: Uphawu lwasekhaya oludumileyo, umgangatho ophezulu, ukuhlolwa ngokungqongqo kunye novavanyo, inkonzo elungileyo emva kokuthengisa.
I-Lenath esebenzayo: 1000-4500 MM
Iimpawu: Qinisekisa ubomi ukubhola elungileyo ngokusebenzisa khabhayithi tungsten ophezulu.
Itekhnoloji yokuqina kunye nokuvuthwa okuvuthiweyo kuqinisekisa umgangatho weentonga.
lntegrate unyango ubushushu ukuqinisekisa umgangatho intonga.
Package: Ityala leplanga okanye isicelo sakho
Ixesha lokuzisa: iidavs ezi-3 emva kokuqinisekiswa kwepavment
Isiqwenga Ubunzima: Inkqubo (kg)
Isigidi (mm) Unyawo
2200 7'2 `` 100 680
Q1: Ngaba sinokukhetha umbala weqhosha?
I-Q2: Ngaba singatshintshela kumanqaku ethu kwiqhosha elincinci?
I-Q3: Ngaba unayo inkonzo yasemva kokuthengisa kunye nenkonzo yewaranti?
I-Q4: Ngaba ndingayithemba inkampani yakho?
Egqithileyo Iintonga zamalahle
Okulandelayo: Shank Iadaptha